မယ့်ကိုး: ကျွန်တော် မပျော်ဘူးအမေ။ အိမ်ပြန်လာချင်တယ်။
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 3/26/2014 07:58:00 AM
း)ဒါပေမယ့် ဒီအဖြစ်ကို သဘောမကျသလို တိုးပွားသာယာလာမှာကိုလည်း စိုးရွံ့မိတယ်
28/3/14 4:51 PM
Agree with the above comment. Though I don't have anything personally against the gay people, but I am very worried that it will be accepted asanorm in the society.
28/3/14 9:34 PM
29/3/14 11:40 AM
မပျော်ဘူးဆို ပြန်လာပါလား လို့ အိမ်က မျှော်နေမှာပဲ နော်။
1/4/14 6:24 PM
အဲဒီစာအုပ်လေးကို မုံရွာဘက်ရောက်အောင် ဖြန့်ပေးပါနော်မမ။ ကျနော် မယ့် ပရိသတ်တစ်ယောက်ပါ။